कारमा एसी चलाउने ५ तरिका, जसले माइलेज घट्दैन
1:46 pm, बिहीबार, वैशाख ५, २०७६
काठमाडौं । आजकल गर्मी बड्दो छ । काठमाडौंको बाटोमा कार चलाएर हिड्दा झ्याल खोलेर हिड्न पटक्कै सम्भब छैन । यहाँका बाटाहरुमा उड्ने धुलोले बिरामी नै बनाउन सक्छ । त्यसैले कारको झ्याल बन्द गरेर हिड्नका लागि यो गर्मिमा सम्भवनै छैन ।
यस्तोमा कारमा रहेको एसीले ठूलो सहयोग गर्छ । एसी बिना गर्मिमा काठमाडौंमा कारमा यात्रा गर्नु भनेको पसिनाले भिज्नु वा धुलोले विरामी पर्नु जस्तै हो । तर कारमा एसी चलाएर हिड्दा कारको माईलेज तथा पफर्मेन्समा कमी आउनसक्छ । त्यसैले कुन तरिकाले एसीको प्रयोग गर्दा माईलेज तथा पिकअपमा असर गर्दैन भन्ने बिषयमा यहाँ हामीले चर्चा गरेका छौं ।
१. एसीको फ्यानको स्पिड कम/बढिले के फरक पार्छ ?
यसकालागि सबैभन्दा पहिला कारमा रहेको फ्यानको सञ्चालनको मेकानीजमको बारेमा बुझ्न जरुरी छ । कारमा रहेको व्लोअरको फ्यान घुमाउन इन्जिनको केहि सम्बन्ध हुँदैन । यो कारमा रहेको व्याट्रीबाट चल्ने गर्छ । अब व्याट्रीबाट चल्ने अन्य कम्पोनेन्टहरु जस्तै लाईट्स तथा म्युजिक सिस्टम चलाउदा इन्जिनमा केही पनि असर गर्दैन । त्यसरी नै ब्लोअरको स्पीड कम तथा बढी हुँदैमा इन्जिनको पावर, माईलेज तथा प्रफर्मेन्समा केही फरक पर्दैन ।
२. एसीको टेम्प्रेचर कम वा बढी गरेमा माईलेजमा के फरक पर्छ ?
कारमा रहेको एसी सञ्चालन गर्नका लागि एसीको कम्प्रेसर चल्नु पर्छ । उक्त कम्प्रेसर इन्जिनसँग जोडिएको हुन्छ । जब हामीले एसीको बटम अन गर्छौ तब इन्जिनसँग जोडिएको बेल्टले कम्प्रेसरलाई घुमाउने काम गर्छ । जहाँ इन्जिनको पावर प्रयोग हुन्छ र हामीलाई पिकअप कम भएको महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन भइरहेको एसीको टेम्प्रेचर कम गरिदा वा एसीको फ्यानको स्पीड कम गर्दा पनि केहि फरक पर्दैन । एसी अन गर्दा निरन्ततर कम्प्रेसर चलिरहेको हुने भएकाले फ्यानको स्पीड कम गर्नु वा टेम्प्रेचर कम गर्नूले केही फरक पर्दैन । एसी अन गरिरहेको अवस्थामा एयर फ्लो हिटर पट्टि नै लगाएमा पनि कम्प्रेसर चलिरहन्छ मात्र एयर फ्लो हिटर कोयलबाट आउछ तर इन्जिनको पावर भने खर्च भईनै रहन्छ ।
३. कसरी माईलेज दुरुस्त राख्न सकिन्छ ?
कार गुडिरहदा एसी चलाईएको छ भने त्यसले कारको माइलेजमा खासै फरक पर्दैन तर, कार रोकिरहँदा एसी चलाउने हो भने त्यसले इन्धन बढी खपत गर्ने गर्छ । त्यसकारण कारको माइलेजमा कमी नल्याउने हो भने रेड लाईटमा रोकिदा वा जाममा पर्दा कारको एसी बन्द गर्नुपर्छ तर फ्यान भने खोलीराख्न सकिन्छ किनकी फ्यान ब्याट्रीले सञ्चालन गर्छ इन्जिनले होइन ।
४. हावाको फ्लो कताको मिलाउने
गर्मीको समयमा कारको तापक्रम चिसो बनाउनका लागि एसी चलाउँदा जहिले पनि क्याविनमा हावाको फ्लोको सोर्स क्याविन भित्रको मात्र राख्नु पर्छ जसले गर्दा क्याविन भित्रको हावा मात्र सर्कूलेट भईरहन्छ र तापक्रम चाँडो चिसो हुने गर्छ । तर लामो यात्रा गरिरहदा क्याविन भित्रको मात्र हावा सर्कुलेट गरिरहन हुदैन । विशेषत २ वा २ भन्दा बढी व्यक्ति यात्रा गरिरहेको हो भने प्रत्येक १ घण्टामा २/४ मिनेटका लागि हावाको फ्लो बाहिरबाट गराउनु पर्छ जसको सहयोगमा क्याविनको अक्सिजनकोे मात्र मेनटेन हुनेछ ।
५. एसी अन गर्नू अघि यी कार्य गर्नुहोस्
कारमा एसीको सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट प्राप्त गर्नका लागि पहिला एसी स्टार्ट गर्नु पूर्व कारको फ्यान चलाएर सबै झ्यालहरु एकछिन खोल्ने, जसले कारमा जम्मा भएको तातो हावालाई बाहिर पठाउनु पर्छ । केही समयपछि एसी अन गरेर एसीको हावाको फ्लो ड्राईभरको खुट्टा पटी लगाउनु पर्छ । जसले गर्दा चिसो हावाले तातो हावालाई धकेल्दै विस्तार माथि हुँदै बाहिर पठाउन सजिलो हुन्छ । किनकी तातो हावा जहिले पनि माथि रहने गर्छ भने चिसो हावा सतहको तल रहने गर्छ । यो प्रकृया अपनाउने हो भने क्याविनको तापक्रम छिटो चिसो बनाउन सकिन्छ । तर सकेसम्म कारलाई पार्क गर्दा सिधा घाम नपर्ने गरि वा ओझेल परेको ठाँउमा पार्क गर्न सके कारको क्याविनको टेम्प्रेचर अझ छिटो चिसो बनाउन सकिन्छ ।